အကွောငျး – 2ငါးကို
မူလစာမျက်နှာ / အကွောငျး
2fish.co အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတစ်ဦးကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်, အနည်းငယ်ကက်သလစ်ယဇ်ပုရောဟိတ်များအပါအဝင်, ကက်သလစ်ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ခုခံကာကွယ်ခြင်းနှင့်ရှင်းပြဖို့ဆက်ကပ်အပ်နှံထား–အထူးသဖြင့်ကက်သလစ်ယုံကြည်ခြင်းအားရောမအင်ပါယာ–အကြောင်းပြချက်နှင့်အမှန်တရားကိုမှတစ်ဆင့်.
လူအပေါင်းတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ site ကိုလေ့လာစူးစမ်းနှငျ့ဘုရားသခငျရဲ့သတင်းစကားနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူဖတ်ရှုဖို့ကြိုဆိုကြောင်း. သင်သည်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့များအတွက်မေးခွန်းတွေကတင်သွင်းဖို့ကြိုဆိုကြောင်း “တစ်ယဇ်ပုရောဟိတ်မေးပါ” တစ်အကြိုက်ဆုံးတင်ပြရန်စာမျက်နှာသို့မဟုတ် တရားဟောပွောခကျြ. ကျနော်တို့ပြန်ကြားချက် post နှင့်တတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံး content တွေကိုလက်ခံမည်ဟု, ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တစ်ဦးစေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်း, အသီးအသီးအဖွဲ့ဝင်ရှိပါတယ် (အနည်းဆုံး) တဦးတည်းအပြည့်အဝ-အချိန်အလုပ်.
ဖြစ်နိုင်တဲ့အတိုင်းအတာအထိ, ကျနော်တို့ရဲ့ကြိုဆိုပွဲနှင့်သတင်းစကား ecumenical ဖြစ်ပါသည်, အစဉ်အဆက်ကက်သလစ်ဘာသာ၏ဗဟိုသဘောတရားသစ္စာဖောက်ပြီးမပါဘဲ. အမျိုးမျိုးသောတွင်ခရစ်ယာန်ဂိုဏ်းတို့တွင်အကွဲပြားခြားနားမှုထက်ပိုမိုတူညီရှိပါတယ်, ကျွန်ုပ်တို့သည်သူတို့အားတူညီအောင်ပွဲခံနေစဉ်, ငါတို့ပြုသကဲ့သို့ငါတို့သည်လည်းကျွန်ုပ်တို့သည်အဘယ်သို့ပြုမည်အရာကိုမယုံကြည်ရှင်းပြခြင်းနှင့်လေ့ကငျြ့ပါမညျ.
ကျွန်ုပ်တို့သည်နာမတော်ကိုမရှေးခယျြခဲ့ “2ငါးကို” ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နှစ်ဆအဓိပ္ပာယ်.
ပထမဦးဆုံး, ၏အံ့ဖွယ်နှင့်တူ (နှစ်ဦး) ငါးနှင့် (ငါးခု) လေးခုခရစ်ဝင်ကျမ်း၏အသီးအသီးအတွက်ပေါ်လာမုနျ့, ကျွန်ုပ်တို့သည်အလွန်နည်းပါးသယံဇာတအရင်းအမြစ်များနှင့်အတူတတ်နိုင်သမျှကဲ့သို့များစွာသောလူကိုထိခိုက်စေချင်. ဒါကြောင့်, Springsteen သီဆိုနှင့်တူ, “ကျနော်တို့ countin င့်’ အံ့ဖွယ်အပေါ်။”
ဒုတိယအချက်မှာ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလွတ်သဘောမှတဆင့် (ဖြစ်နိုင်တဲ့အတိုင်းအတာအထိ), အပြုသဘော, အားလုံးပါဝင်နိုင် (နှင့်, မြျှောလငျ့စှာ, ဖှယျ) သတင်းစကား, ကျွန်တော်အနည်းငယ်ငါးကိုဖမ်းရန်မျှော်လင့်ပါတယ်, လွန်း. ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ ပိုမိုသောသတင်းအချက်အလက်များ.